Sharif Hassan oo u soo tafa-xaytay rididda dowladda raisuwasaareKheyre | Somalimedia
Sharif Hassan oo u soo tafa-xaytay rididda dowladda raisuwasaareKheyre
Xog ay heshay warbaahintaA�ayaa sheegeysa in Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan uu kulan gaar ah la qaatay Xildhibaanada laga soo doortay deegaanada Koonfur Galbeed, waxaana kulanka uu ku saleysnaa inay u hormuud ka noqdaan xildhibaanada doonaya inay ridaan Xukuumada Soomaaliya.
Khilaaf xoogan oo ka dhaxeeya Shariif iyo Raa��iisul wasaare Kheyre ayaa sabab u noqonaya in Xildhibaanada uu ku booriyo inay ka soo horjeestaan Kheyre.
Labadaan masuul ayaa aad isku khilaafay markii Xildhibaano Mooshin ka wada Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu kulan la qaatay Raa��iisul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya, taas uu ka carooday Shariif Xasan.
Xaalada adag oo ku dhex jirto xukuumada Kheyre ayuu kaga faaa��iideysanayaa Shariif Xasan oo lagu yaqaano siyaasad aar goosi.
Kulanka ka dib ayaa Xildhibaanada iyo Madaxweynaha waxay isla garteen inaysan taageerin Goa��aankii xukuumada ka qaatay arinta Qalbi dhagax, iyagoo xulufeysana xildhibaanada kale ee ka soo horjeeda.